Miezaka tsy mamaly ny vadiko foana aho ato an-trano ho fanajako azy sady hisorohako ny fifandirana.
Manampy ny vady hiala toaka
Ny olona tena tia dia ny olona mahatsapa fa tiana. Ny tena ato hoe fitiavana dia tsy misy fepetra! Rehefa tiana ilay olona dia tena tiana, ary fitiavana manaiky hamindra fo no manentana azy.
Vehivavy 16 taona aho, tia lehilahy iray 20 taona.
Hitako niaraka tamin’olon-kafa anefa izy tamin’ny volana febroary teo ary rehefa nanadihady aho dia fantatro fa efa 4 taona niarahana ry zareo.
Adidin’ny raim-pianakaviana ny mitandro ny fahadiovan’ny zanany vavy
Ilaina ny raim-pianakaviana, ary tena manana adidiy lehibe tokoa hanabe ny zanany vavy kanefa tsy fanaontsika loatra izany.
Raha ny olon-tiako ve no mahateny ratsy amiko foana isaky ny tezitra amiko dia mbola mety ho tia ahy ihany izy ?
Samy manana ny fomba fanehoany hatezerana ny olona, arakaraky ny fomba nitaizana azy, ny kolontsainy sy ny soatoaviny.
Rahoviana no tokony hiresaka “sipa” ny ankizy vavy?
Ankehitriny dia efa mandroso be izany resaka “sipa” izany. Any am-pianarana ohatra dia efa misy an’ilay hoe : “… I anona = i anona”;
Votsy : Inona no mahatonga azy?
Manaratsy endrika sy manelingelina be ny tanana na ny faritra misy azy ny votsy. Inona marina no mahatonga azy io? Marina ve fa noho ny vary masaka nipetaka tamin’ny tanana na ny kiran-trondro no mahatonga azy ireny ?
Rehefa tsy miteny anefa aho dia lasa manararaotra ahy izy. Inona no hataoko fa tsy zakako intsony ny vavany? Mba vonjeo.
Ao anatin’ny tokantrano dia ilaina ny fifandeferana ; ilaina koa ny fahaizana mihaino ny ankilany mba hampilamina ny fifandraisana. Na izany aza anefa, rehefa misy ny zavatra tokony ho tenenina dia lazaina izany. Lohan’ny tokantrano ny lehilahy fa tsy fanaparan-pahefana sy hery anefa ny ao an-tokantrano. Mila resahinao aminy mazava izany. ilaina ny mampiaka-peo indraindray mba hahafahan’ny hafa mihaino anao sy hahitany ny zavatra tsy hitany hatrizay.
Manana olon-tiana aho, ary milamina tsara izahay roa. Ny zokiny kosa nefa dia manadala ahy , mandefa sms foana. Efa novaliako ihany izy hoe tsy mety izany, saingy mbola misisika ny hiteny amiko foana izy hoe tia ahy. Tokony ho teneniko amin’ilay olon-tiako ve izany? Sa inona no tokony hataoko?
Aza mbola tenenina amin’ilay olon-tianao aloha izany, mba itandrovana ny fihavanan’izy ireo. Raha mbola mamerina mandefa sms aminao kosa izy dia aza raharahiana fotsiny. Rehefa mifankahita ianareo dia aza maneho fihetsika mety ho azony adika vilana. Ataovy ho toy ny tsy nisy ny sms nalefany, aza manakaiky be azy, aza miresaka be na manao vazivavy fa arahabao fotsiny izy dia hajao. Raha mbola tsy mampihemotra azy izany fihetsikao izany dia lazao aminy, amin’ny fomba hentitra, fa ho lazainao amin’ilay zandriny ny ataony, raha mbola manohy izy. Aorian’izay, raha mbola tsy mahay mipetraka izy, vao miresaka amin’ilay olon-tianao ny momba izany ianao.
Mba mangataka fanampiana fa mahatsiaro mikorontana amin’ny zavatra rehetra ataoko aho. Ohatra : eo amin’ny asako, eo amin’ny fiarahako amin’ny namako, tsy tia miresaka amin’olona, tsy tia mitsiky, lasa kamovavy, … Ary ny tena olana koa dia izao : mahatsiaro irery aho, nefa manana olon-tiana. Lasa kivikivy amin’ny fiainana aho, ary lasa mihena.
Mila ezaka be avy any aminao mihitsy ny fahaizana mitia ny tenanao satria mety misy zavatra tsy tianao any amin’ny tenanao, hany ka tsy mety avokoa izay ataonao. Mahaiza ihany koa matoky tena amin’izay rehetra atao. Ataovy aloha izay mahafalifaly anao vao mieritreritra ny hafa. Mahaiza manaiky sy mankafy izay ananana fa ny fitsiriritana be loatra ny tsy an’ny tena ihany koa dia mahatonga anao hieritreritra fa tsy mahomby ny fiainanao, ary tsy mahavita na inona na inona ny tenanao.